रिटिङ रिटिङ बिनायो बजाँउदै अर्काको छोरी उडाईयो : एलपी जोशी | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
रिटिङ रिटिङ बिनायो बजाँउदै अर्काको छोरी उडाईयो : एलपी जोशी
नेपाली लोकगीत संगीतको क्षेत्रमा एलपी जोशीको नाम कुने नौलो नाम होईन । लोकभाकाको उत्थानमा समेत उहाँले खेलेको भुमिका अनुकरणीय छ । २०१९ देखि २९ सालको एकदशक रेडियो नेपालमा जोशीकै गितले मात्र स्थान पाए । ५० बढी गित रेकर्ड गर्नुभएका जोशीले थुप्रै भाषामा गित गाउनुभएको छ । रिटिङ रिटिङ नबजाउ बिनायो,नेपाली माया नेपालै कस्तो छ लगायत दर्जनौ उहाँका गीतहरु कालजयी छन ।
नारायण गोपाल, फत्तेमान, बालकृष्ण सम गोपाल योञ्जन लगायतका गायक तथा साहित्यकारहरुसँग संगत गर्नुभएका जोशी १९९३ सालको लक्ष्मीपुजाका दिन मातापिता स्व.कृष्णमानसिंह र बिष्णुकुमारी जोशीको ८ सन्तानमध्ये सातौँ सन्तानको रुपमा धनकुटा बजारमा जन्मिनुभएको हो । ८३ बर्षको उमेरमा पनि जोश जाँगर र उत्साहका साथ गीत संगीतमा सक्रिय उहाँले २०२४ सालदेखि झापाको दमकमा रहेर गीत संगीतमै सक्रिय उहाँसँग नरेन्द्र बस्नेतले गरेका कुराकानीका अंशहरु :
तपाईको गीत संगितको यात्रा कहिलेदेखि शुरु भयो ? मेरो गीत संगित २०१३ सालमा रेडियो नेपालमा स्वर परिक्षा पास भएपछि शुरु भएको हो । त्यसअघि म नाटक खेल्थेँ । २००८ सालमा मसान नाटकमा मैले आमाको रोल गरेको थिएँ । त्यसको अलावा म पेन्टिङ गर्दथे । म काठमाण्डौ गएर नेपाली माया नेपालै कस्तो छ,गित रेकर्ड गराएपछि चाँहि म गायनमा सक्रिय भएँ ।
लक्ष्मीप्रसाद जोशीबाट कसरी एलपी जोशी हुनुभयो ? कुरा त एउटै हो एलपी अर्थात लक्ष्मीप्रसाद तर सानोमा लक्ष्मीभन्दा सबैले केटी भनेर जिस्काउँथे । कति केटहरुले त यो लक्ष्मी भनेको को केटी रैछे भनेको पनि सुनेको छु । म त केटा मान्छे केटी भन्न थालेपछि मैले नाम नै परिबर्तन गरेँ ।
गीत गाँउछु भन्ने सोच सानैमा थियो ?
थिएन । रहरै रहरमा लागियो । पछि यस्तो होला, म यस्तो गाँउछु भनेर लागिएन । गाउँदै जाँदा आज यस्तो भयो । राजा महेन्द्रबाट २०१९ सालमा राष्ट्रब्यापी गितमा प्रथम भएर सवर्णपदक पाएपछि चााहि वास्तवमै गायन यात्रा शुरु भयो ।
तपाईले गाएका गितहरुमध्ये कुन गीत तपाईलाई मन पर्छ ?
मलार्इ सबै गीतहरु मनपर्छ । त्यसमा पनि रिटिङ रिटिङ नबजाउ बिनायो, बिनायोले घरबारै हिनायो, भन्ने गितले चाँहि बिशेष मलाई चिनायो । अहिले पनि यहि गीतबाट बिशेषगरी मलाई चिन्छन । गीत गाएर अरुको घरबार चाँहि कत्तिको हिनाउनुभयो ? हाहाहा हिनाईएन बरु घरबार जोडियो । त्यो समयमा गिताङगेलाई कस्ले छोरी दिन्छ भन्थे कसैले छोरी दिएनन । गाँउमा मन परेकी केटी सँग बिवाह गर्न माग्न जाँदा नदिएपछि मैले पनि भगाँए । अनि नयाँ घरबार जोडियो । अहिले उनी छैनन तरपनि मैले गीत गाएरै उनलाई जोडेको हुुँ ।
लोकगीतको बजार कस्तो छ अहिले ?
बजार त राम्रो छ तर समय सँगै गितका लय र भाकाहरु फेरिएका छन । पुराना गितहरु रिमिक्स भएका छन । फेरी बजारमा ३ वटा गीत गाएर ३ सय गाएँ भन्नेहरु बढेका छन । यस्ता कलाकारका कारण बजार बिग्रिएको छ । फेरी पुराना गीतहरु बिना अनुमति चोरी गरेर गाउनेहरु पनि बढेका छन । मेरै पनि केही गितहरु चोरिएका छन । जुन गितहरु अहिले पनि चर्चित छन ।
तपाईको गीत चााहि रिमिक्स गर्न दिनुभएन ?
मेरो गीत माग्ने थुप्रै छन । मैले अहिले सम्म दिएको छैन । अबचाँहि दिनुपर्ला भन्ने सोचमा छु ।
जीवनप्रति कुनै गुनासो छ ?
अहिले पटक्कै छैन । त्यसबेला नजानेरै गरेको कामले अहिले सन्तुष्टि दिएको छ । समाजमा मान सम्मान दिएको छ । परिचय दिएको छ । केही समय श्रीमतीले गुनासो गरिन पछि उनले पनि बुझिन अहिले उनी म सँग छैनन । गुनासो त्यति मात्र छ बुढेसकालमा श्रीमती म सँगै भैदिएको भए कति जाति हुन्थयो जस्तो लाग्छ । – पुर्बेली न्युजबाट